कोरोना भाइरसको त्रासले पानी जहाजमै थुनिए ७ हजार यात्रु ! | Nepal123.com
कोरोना भाइरसको त्रासले पानी जहाजमै थुनिए ७ हजार यात्रु !
Author: admin Published Date: January 31, 2020 LeaveaComment on कोरोना भाइरसको त्रासले पानी जहाजमै थुनिए ७ हजार यात्रु !
इटाली– इटालीमा कोरोना भाइरसको त्रासका कारण ७ हजार यात्रु पानी जहाजमै थुनिनु परेको छ । इटलीको एउटा क्रुज पानी जहाजबाट राजधानी रोमनजिकै सिभिटाभेसिया बन्दरगाहमा उत्रिन लागेका यात्रु कोरोना भाइरसको त्रासले पानीजहाजभित्रै थुनिनु परेको जनाइएको छ । जहाजमा सवार यात्रुमध्ये एक जना चिनियाँ महिलालाई कोरोनाभाइरसको लक्षण देखिएपछि यात्रुलाई जहाजबाट उत्रिन दिइएको थिएन । यद्यपि बिहीबार अबेर […]
← कङ्गोको आक्रमणमा करिब २४ जना मारिए
कोरोना भाइरसको उपचारका लागि उहानमै ७० भन्दा बढी नयाँ स्वास्थ्य केन्द्र →